I-China Fast injabulo ye Photoluminescent Pigment fektri kanye nabakhiqizi | I-Grand Luminous
Ukushesha kwe-Photoluminescent Pigment ejabulile abezindaba. Xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane. Ngokwesithenjwa sakho, imininingwane elandelayo yale pigment esijabulile esisheshayo: Umbala okhanyayo: Uchungechunge oluhlaza lomkhiqizo ophuzi / ikhodi Ukukhanyisa （mcd / m2） Isikhathi se-Afterglow Min Min ...
Lolu hlobo lwe-phosphor kulula ukuholwa ngokushesha, lungajatshuliswa ukukhanya okubuthakathaka, ukusebenza kwe-luminescence kusobala kumaminithi angama-30 ~ 60, umbala we-powder uphuzi okhanyayo, futhi uhambelana kakhulu neminye imidiya. Xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.
Ngokwesithenjwa sakho, imininingwane elandelayo yale pigment ejabule ngokushesha:
Umbala okhanyayo:ophuzi-oluhlaza okotshani
Izinhlobo / ikhodi
Ukukhanyisa （mcd / m2）
Isikhathi sase-Afterglow Min
Usayizi wezinhlayiyana (ku-D D50)
I-Dmax (um) <
Esedlule: ILinkous Printa Ink
Olandelayo: Imifino engilazi ekhanyayo